Buhaari oo la dhaariyay - BBC Somali
Buhaari oo la dhaariyay
Lahaanshaha sawirka NTA
Image caption Madaxweynaha xilka ka dagay Goodluck Jonathan iyo madaxweynaha xilka loo dhaariyay, Muxamaduu Buhari
Madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria, xaflad ceelama saar ah oo ka dhacday magaalada caasimada ah ee Abuja.
Muxamaduu Buhari, oo horay u ahaan jiray hogaamiye milateri oo xukun adkaa ayaa waxa uu doorashadii la qabtay bishii Maarso kaga guulaystay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalkaasi Goodluck Jonathan.
Waa markii ugu horreysay taariikhda dalka Nigeria oo dowlad ay si nabdoon xilka ugu wareejiso mucaaradka.
Muxamaduu Buhari oo ah nin dhuuban oo askari soo ahaan jiray, kuna dhashay magaalada Daura ee woqooyiga Nigeria muddo haatan laga joogo 72 sano ayaa caan noqday sanadkii 1983-dii, xilligaasi oo uu inqilaab milateri xukunka uga tuuray dowlad si dimuquraadi ah loo soo doortay.
Hogaamiyahani milateriga ee xukunka adkaa ayaa caan ku ahaa dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa, oo wuxuu xabsiga dhigay siyaasiin badan.
Balse wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu sheegay in uu qaatay hannaanka dimuquraadiyadda.
Waxa uu ku guuleystay doorasho ay kormeerayaashu ay ku tilmaameen tii ugu xor iyo xaq sanayd ee abid ka dhacdo dalkaasi Nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha roon qaaradda Afrika.
Image caption Muxamaduu Buhari oo u dabaaldegaya guusha uu gaaray doorashadii la gabtay bishii Maarso ee sanadkan
Guusha Muxamaduu Buhari uu ka soo hooyay doorashadaasi ayaa timid kaddib markii uu guul darro kala kulmay saddex doorasho oo hore, waxa uuna khibradiisa dhanka maamulka ah ku soo kordhin doonaa dalkaasi Nigeria oo uu horey xilal badan ka soo qabtay.
Inkastoo uu xilal badan horey u soo qabtay, Muxamaduu Buhari, waxa uu aad uga duwan yahay inta badan hogaamiyeyaasha kale ee dalkaasi Nigeria oo muddadii uu xilka hayay ma uusan uruursan dhaqaalo badan.
Waxa uu xilka la wareegayaa iyada oo dalkaasi ay ka jiraan tallaabooyin lagu baritaarayo dhaqaalaha dalkaasi oo ay horseedeen sicirka saliidda ee sii dhacaya iyo musuqmaasuqa.
Caqabadaha ugu weyn ee uu la kulmi doono ayaa waxaa ka mid ah kacdoonka kooxda Boko Xaraam oo galaafatay nolasha 13,000 oo qof, isla markaana ay ku bartakeceen in ka badan 1.5 milyan oo qof.
Waa markii labaad oo hogaamiye xukun adag oo milateriga ka tirsanaan jiray xilka madaxweynaha loo dhaariyo isaga oo rayid ah, balse waa markii ugu horreysay oo si nabad ah xilka loogu wareejiyo madaxweyne la doortay oo mucaarad ah.